सहारा यूकेका अध्यक्ष कुमार गुरुङ भन्छन्, ‘सहारा यूकेको छिट्टै आफ्नै एकेडेमी बनाउनेछौं’ | Everest Times UK
सन् २०१८ डिसेम्बर २२ तारिखका दिन सहारा यूकेको छैटौं कार्यसमितिको अध्यक्षमा चयन भएका हुन्, कुमार गुरुङ । अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि उनले २०१९ जनवरीबाट दुई वर्षे कार्यकाल सम्हाल्नुभयो । १० वर्षअघि स्थापना भएको सहारा यूके फुटबल क्षेत्रको विकास, बेलायतमा रहेका युवालाई फुटबलप्रति आकर्षण र नेपालमा हरेक खालका राहत तथा सहयोग जुटाउँदै आएको छ सहारा यूकेले । बेलायतमै फुटबल एकेडेमीको अध्ययन/अनुसन्धान थालिसकेको बताउने अध्यक्ष कुमार गुरुङसँग सहारा यूकेले अहिले गरिरहेको काम र आगामी योजनाका विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, सहारा यूकेका अध्यक्ष गुरुङसँग एभरेस्ट टाइम्सका पूर्ण गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुभएको चार महिना बित्नै लागेको छ । यस समयमा के के गर्नुभयो ?
सहारा यूकेको छैटौं कार्यसमितिले जनवरी फस्टदेखि कार्यभार लिएको हो । त्यसपछि सहारा यूकेको कार्यसमिति र सदस्यहरु नेपालको कास्की पोखरामा गयौं । जहाँ १७ औं आहा ! रारा गोल्डकप आयोजना गरिएको थियो । २१ फेब्रुअरीदेखि २ मार्चसम्म (फागुन ९ देखि १८ सम्म) थियो । सहारा यूकेको पहिलो काम भनौं या सपोर्ट भनौ त्यही भयो ।
पोखरामा हुने आहा रारा गोल्डकपमा सहारा यूके हरेक वर्ष सहभागी हुनुको कारण के छ ?
हाम्रो बेस नै सहारा क्लब पोखरा हो । सहारा क्लबबाट नै सहारा यूके सम्बन्धन प्राप्त भएको छ । सहारा क्लब पोखराबाट सहारा यूके, सहारा हङकङमात्रै नभई सहारा अस्ट्रेलिया खोलिएका छन् । तीनवटा हाँगा विदेशमा बनेकोले सहारा क्लब पोखरा केन्द्र हो । केन्द्रले आयोजना गर्ने महत्वपूर्ण आहा रारा टुर्नामेन्टमा शाखाहरुले के के सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पोखरा जाने गर्छौं ।
कस्तो खालको सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ?
सहारा क्लब पोखराले आयोजना गर्ने आहा ! रारा टुर्नामेन्टलगायत कार्यक्रममा विभिन्न खालका सहयोग दिने गरेका छौं । यस पटककै कुरा गर्दा सो गोल्डकपमा आवश्यक जति पनि ट्रफी, मेडल सहारा यूकेबाट नै प्रदान गर्छौं । नगद पुरस्कार रकम पनि दिने गरेका छौं । सहारा यूके टुर्नामेन्टमै सहभागी हुनु भनेको सहारा क्लब पोखरालाई मद्दत दिनु हो । हामीले स्पोन्सर पुरस्कारहरु मात्रै नभएर टुर्नामेन्ट हुनुअघि सहारा क्लब पोखरासँग हङकङ, अस्ट्रेलिया सहाराका साथीहरुबीच बैठक हुन्छ । बैठकमा उठेका विभिन्न विषयमा हामीले सक्ने मद्दत दिँदै आएका छौं ।
विदेशमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरुले राहत दिन होस् वा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने विषयमा नेपाललाई नै प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् । बेलायतमा रहेका फुटबलप्रेमी युवाहरुको विषयमा सहारा यूकेले के पहल गरिरहेको छ ?
आहा रारा गोल्डकपकै लागि यस पटक सहारा यूकेबाट तीन दर्जनजति कार्यकारी र सदस्यहरु पोखरा गयौं । फुटबल टुर्नामेन्टमात्रै नभएर भूकम्पका बेला राहत र त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकमा सहारा यूकेले दुई स्कुल पनि बनाइदियो । त्यसरी हेर्दा नेपालमा मात्रै फोकस देखिएको हो । जति नेपालमा भइरहेको छ, त्यत्ति यूकेमा पनि कामहरु भइराखेका छन् ।
सहारा यूकेको आफ्नै टिम छ । गएको ६ वर्ष हामीले सन्डे लिग डिभिजन वान खेलायौं । सन् २०१८ बाट ह्याम्सायर मिड विक लिग खेलाउँदैछौं । भाइहरु अहिले पनि हुनुहुन्छ । ह्याम्सायर काउन्टीका नेपाली समुदायहरुमा यस्ता टुर्नामेन्टहरु थुप्रै भइराखेका हुन्छन् । जस्तै नजिक आइरहेको गोर्खा कप । त्यसमा सहारा यूकेको टिम सहभागी हुनेछ । जति पनि नेपाली कम्युनिटीमा भएका टुर्नामेन्टहरुमा पनि उहाँहरुले सहभागी भएर सहयोग पुर्या‍उनु हुन्छ ।
दुई वर्षे कार्यकालमा कस्ता योजनाहरु बनाउनुभएको छ ?
मैले नेतृत्व लिएको चार महिना पुगिसकेको छैन । अहिलेसम्म दुईटा मिटिङ भयो सहारा यूकेमा । पहिलो मिटिङ नेपाल जानुभन्दा अगाडि १३ जनवरीमा र दोस्रो मिटिङ गएको ६ अप्रिलमा भएको थियो । ती मिटिङहरुमा जुन कुरा मैले राखेँ, त्यो सबै सदस्यहरुले बुझिसक्नुभयो । १३ जनवरीको बैठकमा हामी यस्तो गर्दैछौं, यसरी जाऔं भनेर प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ । त्यही प्रस्ताव कार्यसमितिका साथीहरुले ग्रहण गर्नुभयो । त्यही नै ६ अप्रिलको मिटिङमा ल्याएँ । त्यो दिनसम्म आउँदो सबै टिमका साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिइसकेका थिए ।
उहाँहरुले पाएको जिम्मेवारीअनुसार बैठकमा प्रस्तुतिकरण दिनुभयो । हामी फुटबल मात्र नभएर सामाजिक काम पनि गरिराखेका छौं । स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ, सहारा यूके । यसले फुटबल विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर समयअनुसार काम गरिराखेका छौं । सन्डे र ह्यामसायरको टिम छ । जसमा १८ देखि ३० उमेर समूहका भाइहरु छन् । त्यसलाई भविष्यमा निरन्तरता दिनेछु । अहिले मैदान अरुले उपलब्ध गराउने र हामीले भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ । अब आफ्नै एकेडेमी भए राम्रो भन्ने हाम्रो सपना छ । त्यसका लागि अध्ययन/अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अर्को कुरा, हामीले उत्पादन गरेका खेलाडीले भविष्यमा प्रिमियर लिगमा खेल्न सकुन् भन्ने सपना छ । भविष्यमा १२ वर्षमुनिका र ६ वर्षभन्दा माथिका नानीहरुलाई खेलाएर क्लबहरुमा पठाउने योजना छ ।
कति बजेटको एकेडेमी ताकिरहनुभएको छ ?
आफूले गर्न नसक्ने आँट्नु हुँदैन । सहारा यूकेका मेम्बर्सले कति फन्ड कलेक्सन गर्न सकिन्छ । सहाराको शुभचिन्तक, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । त्यसकारण नै हामीले गरेका कामहरु सफल भइराखेका छन् । अब उहाँहरुबाट कत्तिको सहयोग पाउँछौं । काउन्सिलबाट कत्तिको मद्दत पाउँछौं । भविष्यमा थाह पाउने कुरा हो । तर, पनि हामी एकेडेमीको रिसर्च गर्नेक्रममा छौं ।
तपाईंकै कार्यकालभित्र एकेडेमीको सपना पूरा हुन्छ त ?
यो बैठकमा छलफल भइसकेको विषय हो । रिसर्चका लागि पूर्वप्रेसिडेन्ट दिलीप गुरुङज्यूलाई छैटौं कार्यसमितिबाट एउटा टाक्स दिएका छौं । उहाँ एक्लैले गर्ने होइन, उहाँले रिसर्च मात्रै हो । अब जुनमा कोअर्डिनेटर मिटिङ हुँदैछ । त्यसमा एकेडेमीका लागि टिम खडा गर्छौं । एकेडेमीका लागि ह्यामसायर क्षेत्र, जहाँ खुला ठाउँ हो । कुनै पुराना स्कुलहरु पनि हुनसक्छन् । एकेडेमी भन्नेबित्तिकै मैदान, अफिस राख्न मिल्ने र चेन्जिङ रुमको व्यवस्था हुनुपर्यो‍ । बजेट धेरै नै लाग्छ । त्यसका लागि उठाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा छ । दुई वर्षमा होइन, ६ सात वर्षमा एकेडेमीको सपना पूरा हुन सक्छ ।
सहारा क्लब पोखराको एकेडेमी बनाउन पनि समय लागेको थियो । हामीले एक करोड ४० लाख सहयोग गर्‍यौं । त्यहीजस्तै हामी पनि सक्छौं ।
एकेडेमीको लागि स्रोत कसरी जुटाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
फन्ड रेइज गर्नका लागि सहारा यूकेले हरेक वर्ष च्यारिटी डिनर आयोजना गर्ने छ । त्यत्तिले मात्रै हुँदैन । च्यारिटी डिनरमा कति नाफा हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । पोखरा सहारा क्लबको एकेडेमी बनाउन हामीले इन्डिभिजुल्ली ४÷५ लाख रुपैयाँ दिएको छौं । एभरेजमा ५० हजार त सबैले दिएको छ । त्यसैले सहारा यूकेको एकेडेमीका लागि पनि बजेट ठूलै चाहियो । हाम्रै मेम्बर्स, शुभचिन्तक र सहयोगी मनहरुबाट उठाउँछौं ।
तपाईंहरुका सदस्य कति छन् त ?
हाम्रा सदस्यहरु अहिलेसम्म जम्मा १ सय ३५ जना छन् । सहारालाई मद्दत दिने सदस्यहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको इन्भल्वमेन्ट बढी छ ।
सहाराको उचाई, गरेको काम, सन्डे लिग ६ वर्षसम्म चलाउनुभयो, तर सदस्यता नबढ्नुका कारण के हो र के छ प्रावधान ?
सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुका लागि सहारा यूकेको सदस्यताका लागि ढोका खुला छ । सबैलाई स्वागत छ । सहारा पोखराका लागिमात्रै होइन । अन्य ठाउँमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा आइरहेको छ । अहिले सहारा यूकेको सदस्य पोखराकै बढी भए पनि पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सबैतिरका सबै जातजाति, भाषाभाषीका सदस्यहरु छन् ।
सहारा यूकेमा अहिलेसम्म दुई किसिमका सदस्यता लिने व्यवस्था छ । गोल्ड मेम्बर । गोल्ड मेम्बरले हरेक महिना पाँच पाउन्ड डाइरेक्ट डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ । फर्म भरेर वर्षमा ६० पाउन्ड दिनुपर्छ संस्थालाई । तर १०/१५ पाउन्ड दिन पनि सक्नुहुन्छ । अरु योग्यतामा फुटबल खेलाडी र त्यससम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्छ भन्ने छैन । अर्डिनरी मेम्बरबाट स्वागत गर्छाैं । यदि कुनै मेम्बर सहारा यूकेमा आउन चाहनुहुन्छ भने अर्डिनरी मेम्बर बनाउँछौं । उहाँहरुको हरेक दुई/दुई वर्षमा रिन्यू गर्छौं । जम्मा २० पाउन्डमा सहाराको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ ।
हरेक वर्ष च्यारिटी कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको छ । त्यसको हिसाबकिताब कसरी राखिन्छ ?
फन्ड जेनेरेट गर्ने नै सहारा यूकेको वार्षिक च्यारिटी डिनर हो । छैटौं कार्यसमितिको पहिलो च्यारिटी भनौं वा सहारा यूकेको ११ औं च्यारिटी डिनर भनौं शनिबार ३० नोभेम्बर २०१९ मा हुँदैछ । च्यारिटी इभेन्ट भन्दैमा जति पनि आउने पाहुनाहरुलाई तोक्ने कुरा आउँदैन । टिकेट सिस्टम हुन्छ । टिकट पनि त्यत्ति महँगो हुँदैन । यो पनि २५ पाउन्डको टिकट बनाउँछौं । च्यारिटी डिनरमा २५ पाउन्ड टिकट बेचेर कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः थाह हुन्छ । धेरै फाइदा हुँदैन । खर्च एकजना व्यक्तिबराबर २० पाउन्ड हुन्छ । अहिलेसम्मको हिसाबमा सहाराको कार्यक्रममा सदस्य, पाहुना गरी चार सय सहभागी हुन्छन् । लाइट, साउन्ड सिस्टम, कलाकारहरुमा खर्च हुन्छ । तैपनि हाम्रो च्यारिटीको उद्देश्यअनुरुप उहाँहरुले टिकटको रेटभन्दा बढी भुक्तानी पनि गरिरहनु भएको हुन्छ ।
२८ जना नानीहरु सहारा क्लब पोखरामा छन् । उनीहरुका शिक्षा, पालनपोषण, खेलकुदलगायतको खर्च सहारा क्लब पोखराले नै व्यहोर्नु प¥यो । त्यसमा खर्च हिसाब गर्दा हरेक महिना दुई लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ । ती नानीहरुको लागि पनि हामीले सहयोग दिँदै आएका छौं । यो वर्ष पनि त्यहीं दिने विचार गरिरहेका छौं ।
जहाँ लगानी गरिरहनुभएको छ, त्यहाँको सफल उदाहरण छन् ?
२८ जना नानीहरुलाई शिक्षा, खेलकुदमा अगाडि बढाउँदै राष्ट्रियस्तरमा लैजाने उद्देश्य छ । सही ठाउँमा लगानी भइरहेको भन्ने महसुस हुन्छ । पोखरा सहारामा पुगेपछि नानीहरुको रिपोर्ट हेर्दा सही ठाउँमा सहयोग गरिएको भान हुन्छ । एकेडेमी त स्थापित भइरहेको अवस्था छ । सायद हामीले एकेडेमीका लागि केही पनि गर्नुपर्दैन । त्यसमा एउटा इन्कम हुनुपर्यो‍ ।
आम्दानीका लागि सहारा क्लब पोखराका दाजुभाइहरुले धेरै दुःख गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दुई करोडको अक्षय कोषको योजना बनाउनुभएको छ । दुई करोड पुर्या‍उन सकियो भने त्यहींबाट आएको ब्याजले खर्च चल्ने भयो । जसमा १ करोड ५० लाख जति भइसकेको छ । त्यो अक्षय कोषका लागि सहारा यूकेको तर्पmबाट ४२ लाख रुपैयाँ दिइसकेका छौं । यदि तपाईलाई पनि इच्छा छ भने सहारा यूकेलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । त्यो दिइसकेपछि नेपालमा जाँदा कसले कति दियो भन्ने जसको नाममा दिएको हो, उसको नाममा राख्ने काम हुँदैछ ।
सहारा यूके एभरेस्ट कप, सहारा कपजस्ता विभिन्न नाममा विभिन्न प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको थियो । तर, बीचमा ब्रेक भयो । अहिलेको अवस्था भनिदिनोस् न ?
पहिले हामीले सहारा कप नामबाट टुर्नामेन्ट गर्दै आएका थियौं । सहारा आफ्नो क्लबको नामबाट भन्दा पनि अरु नामबाट खेलाउँदा राम्रो हुने भएकोले एभरेस्ट कप नामले खेलाउन लागिएको हो ।
निरन्तरताको सबालमा, निकै वर्षको ग्यापपछि गत वर्ष एभरेस्ट कपकै नाममा खेलायौं । सहाराले आफ्नो नेपाली समुदायमा टुर्नामेन्ट रन गरेर आफ्नै छोराछोरी, भाञ्जाभान्जीहरुलाई प्लेटफर्म दिऊ भन्ने सोच हो सहाराको । यूकेमा समरमा हुने गोर्खा कप, यलम्बर हाङ, लखन थापा कपलगायत थुप्रै टुर्नामेन्टको उद्देश्य पनि त्यही हो । हाम्रा थुप्रै क्लबहरु छन् । गोर्खा कपमै पनि ४०/४२ टिम हुन्छन् । धेरै टुर्नामेन्ट हुने तर छोराछोरी, भान्जाभान्जीहरु त्यसैमा बिजी हुने अवस्था भएपछि हामीले ब्रेक लिएका हौं । आखिर फुटबल त निरन्तर भइरहेको छ । जसले गरे पनि उद्देश्य एउटै हो । यो वर्ष खेलाउँदैनौं, भविष्यमा हुन्छ ।
नेपाली फुटबल विकासका लागि सहारा यूके लामो समयदेखि लागिरहेको छ । नेपाली राजदूतावास लन्डनसँग यस विषयमा सहयोग आदानप्रदान कस्तो छ ?
सहारा यूकेलाई हरेक नेपाली समुदायले मात्रै नभएर नेपाली दूतावासबाट पनि सहयोग पाइरहेका छौं । नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई अब बेलायत ल्याउने कुरा भइरहेको छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई कहिले ल्याउने, ल्याउनका लागि के के समस्या हुन्छ ? को को ल्याउँदा हुन्छ । सहारा यूके अल्डरसट टाउनसँग एफिलिटेड छौं । ह्याम्सायर एफए, इंगल्यान्ड एफएसँग एफिलिटेड छौं । यूके नेपाल फ्रेन्डसिप सोसाइटीसँग एफिलिटेड छौं । नेपाली दूतावासले त धेरै सहयोग गरेको छ ।
बेलायतमा नेपाली राष्ट्रिय टोली ल्याउनका लागि पहिले सहारा यूकेले सोचेको थियो । उहाँहरुसँग एफिलेटेड नहुँदा पनि राष्ट्रिय टोलीलाई यहाँ ल्याउन पायो भने, मौका दिन पायो भने राम्रो हुने थियो भन्ने पहिलेबाटै कुरा आएको हो । अब समय आएको छ । सटेन फुटबल क्लबहरुसँग एफिलेटेड हुने मौका पायौैं ।
उहाँहरुले नै ठूलो रोल खेल्नु भएको छ । सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, एन्फाका दुई जना उपाध्यक्ष यहाँ आउनुभएको थियो । त्यतिखेर उहाँहरुलाई स्वागत गर्ने मौका पायो सहारा यूकेले ।
राष्ट्रिय टोलीको विषयमा उहाँहरुसँग कुरा गर्ने मौका पायो । अल्डरसट टाउन एफसीसँग पनि मिटिङ राख्ने मौका पायौं । सन् २०१९ मा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो । तर, राष्ट्रिय टोलीलाई यहाँ ल्याउने भन्ने कुरा एकछिनमा हुने हैन । २०२० को लागि एउटा ड्राफ्ट कोरिसकेको छ । त्यो विषय ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेको छ । हामीले यूके नेपाल फ्रेन्डसीप सोसाइटीको सीईओ फुल्ली इन्भल्व हुनुहुन्छ । ह्याम्सायर एफए, इंगल्यान्ड एफएको स्टार्फहरु फुल्ली इन्भल्व हुनुहुन्छ । भन्नुको मतलब राष्ट्रिय टोली ल्याउनका लागि उहाँले पूरा सहयोग गर्नुभएको छ ।
नेपाली टोली ल्याएर यहाँ को सँग खेलाउने ?
यहाँको टिमसँग नै खेलाउने हो । तर, कहाँ खेलाउने, कसरी खेलाउने भन्ने कुरा आउँदैछ । इंगल्यान्ड एफएले एम्बेसीमा चिठी पनि चलाइसकेको छ । एम्बेसी थ्रु एन्फा अध्यक्ष, खेलकुदमन्त्रीलाई चिठी गइसकेको जस्तो लाग्छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीको पनि समय व्यस्त होला । टाइम मिल्नु परो । अहिलेको योजनाअनुसार २०२० को मेका लागि ड्राफ्ट भइसकेको छ ।
भनेपछि तपाईंकै कार्यकालमा नेपाली राष्ट्रिय टोली यहाँ फ्रेड्न्ली म्याच खेलेर फर्कनेछ ?
गत जनवरीमा नेपाल गएँ म, १७ औं आहा रारा गोल्डकपका लागि । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्षलगायतसँग मिटिङ गर्ने मौका पाएँ । बैठकमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम यूके ल्याउने कुराहरु नै भयो । इंगल्यान्डका ‘सी’ वा कुनै पनि टिमसँग फ्रेड्न्ली म्याच खेलाउने कुरा छ । ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेको छ । हामीले यसमा यूके नेपाल फ्रेन्डसीप सोसाइटीका सीईओ एलान सान्टा फुल्ली इन्भल्व हुनुहुन्छ ।